Hlangana nekati elinothando uNeva Masquerade | Amakati kaNoti
Ikati Neva umaskade Iyisilwane esibukeka sinethenda futhi sinoshukela njengaleso saseSiberia; empeleni, i-protagonist yethu iyinhlobonhlobo yemibala yalokhu. Kuyisilwane esikhohlisayo, esilungele zonke izinhlobo zemindeni ezifuna umngane othuleyo ukuxubha njalo.
KuNoti Gatos sizokutshela yiziphi izici zalesi furry Yinhle - futhi akukaze kushiwo kangcono- nokuthi uyinakekela kanjani ukuze ngijabule kakhulu.
1 Umsuka nomlando wekati likaNeva Masquerade
4 Yikuphi ukunakekelwa okudingwa yiNeva Masquerade?
5 Ingabe ikati lakwaNeva Masquerade likhiqiza ukungezwani komzimba?
6 Kubiza malini ikati likaNeva Masquerade?
7 Izithombe zekati likaNeva Masquerade
Umsuka nomlando wekati likaNeva Masquerade
Ikati elihle likaNeva Masquerade ikati lehlathi elidabuka ezifundeni zomfula iNeva, eRussia. Yinhlobo eyaziwa kakhulu ezweni layo, yize emhlabeni wonke ithola abalandeli ngejubane elisheshayo. Futhi kungukuthi, ngubani ongamelana nalawo mehlo athambile?
Umehluko okuwukuphela kweSiberia umbala wejazi layo, okuyi-colorpoint, enezindlebe, ikhala, umsila nemilenze yombala omnyama ukwedlula wonke umzimba.
Njengoba inesisindo esiphakathi kuka-4 no-9kg, iNeva Masquerade iyikati elifuywayo elisezingeni eliphakathi nendawo. Umzimba wayo unemisipha, uqinile, futhi uvikelwe ungqimba oluminyene lwezinwele ezinde. Ikhanda lingunxantathu, linezindlebe ezimile namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Umsila mude, ulinganisa cishe ngokulingana nomzimba womzimba wawo. Imilenze yayo imifushane kodwa iqinile, yenziwa ukuthi ikwazi ukuhamba amabanga amade uma kunesidingo.
Inesikhathi sokuphila se- Iminyaka engu-20-23.
Kuyikati inothando kakhulu futhi iyazijabulisa ukuthi angahlala kahle ngokumangalisayo ekhaya elinezingane. Ikona kuthule kakhuluYize udinga ukuzivocavoca nsuku zonke ukuze ushise amandla onawo.
Yikuphi ukunakekelwa okudingwa yiNeva Masquerade?
Uzodinga ukudla okusezingeni eliphakeme okunothe ngamaprotheni ezilwane (ubuncane be-70%). Kuyadingeka ukugwema ukunikeza okuphakelayo okuqukethe okusanhlamvu kanye / noma nemikhiqizo evela njengoba kungadala ukungezwani komzimba, ngoba ayinazo izakhi ezinama-enzyme ezidingekayo ukusizakala ngazo.
Okuphakelayo kunconywa ukuthi kugcwale amahora angama-24. Ikati likaNeva Masquerade lidla kancane kaningana ngosuku, ngakho-ke kungcono kakhulu uma likudla mahhala. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuzoba mnandi kakhulu kumndeni wakho wesintu, ngoba kuzodingeka ukhathazeke ngokungeza ukudla ekuseni kanye / noma ntambama uma kungenalutho.
Ngokufanayo, isilwane kumele sibe namanzi ahlanzekile futhi ahlanzekile. Lokhu kuhlala kubalulekile, kepha ikakhulukazi ehlobo lapho amazinga okushisa ephezulu kakhulu.
Nsuku zonke kufanele siyihlanze ngekhadi ukuvimbela izinwele ekuphanjaneni. Kubalulekile futhi ukuthi sihlanze amehlo akhe ngezikhathi ezithile nge-gauze ehlanzekile ehlanganiswe ukumnika kwe-chamomile.
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukususa indle esihlabathini nsuku zonke, futhi uyihlanze ngokuphelele kanye ngesonto noma kanye ngenyanga kuye ngohlobo lwesihlabathi esisetshenzisiwe. Ngalo mqondo, kufanele wazi ukuthi isihlabathi esiminyene, yize sibiza kakhulu, sihlala isikhathi eside kunokujwayelekile; Eqinisweni, uma uhlala nekati elilodwa kuphela, ungahle udinge ukuhlanza ibhokisi lodoti kanye ngenyanga.
Zonke izinsuku kufanele uthathe isikhathi sokudlala nayeKuphakathi ngentambo, ibhola elenziwe nge-aluminium foil, noma ngesilwane esigxishiwe. Kunconywa nokuthi uyiyeke iye engadini noma kuvulandi uma ibiyelwe futhi / noma inohlobo oluthile lwenetha oluvimbela ukuvuza ukuze ikwazi ukuthatha uhambo.
Enye indlela ongayifundisa ukumfundisa ukuhamba ngehhanisi futhi aqashe lapho esengumdlwane, njengoba sichaza Lesi sihloko. Kepha kuyathakazelisa ukuyikhipha uma uhamba endaweni lapho uhlala khona kuthule futhi kungekho siminyaminya. Isibonelo, edolobheni akufanele kukhishwe, ngoba isilwane singazizwa sicindezelekile futhi sesaba.
Ukuba uhlobo oluhlanzekile, okungukuthi, aluzange lusetshenziswe ngabantu, lunempilo enhle kakhulu. Kungagula kwesinye isikhathi, kube nemikhuhlane noma umkhuhlane, njenganoma yiliphi elinye ikati. Uma kwenzeka usola ukuthi akaphilile, mthathe uye kudokotela wezilwane.
Ingabe ikati lakwaNeva Masquerade likhiqiza ukungezwani komzimba?
Ezimweni eziningi (cishe ngama-83%) cha. Njengoba kuyinto ehlukile yaseSiberia futhi lena ikati le-hypoallergenic, iNeva Masquerade iyathakazelisa kakhulu kulabo abaphethwe yizinto ezingezwani nomzimba.
Kubiza malini ikati likaNeva Masquerade?
Ikati lakwaNeva Masquerade linenani elijwayelekile le- I-900 euro. Sincoma ukuwuthola endaweni yokudla esezingeni elifanele, ngoba ngale ndlela ungaqinisekisa ukuthi ubomvu bunempilo nokuthi buthole ukunakekelwa okudingekayo. Yilapho futhi abazokunikeza khona isitifiketi sozalo nokuthi bangaphendula kuphi imibuzo onayo ngabazali bomdlwane.
Izithombe zekati likaNeva Masquerade
Jabulela lezi zithombe ezinhle zeNeva Masquerade:
Isithombe - Cat-breeds-encyclopedia.com
Isithombe - Nobilpazzi.com
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Hlangana nekati elinothando uNeva Masquerade